Marovoay-Boeny: ny Vovonan’ny tantsaha no hitantana ny zava-bitan’ireo tetik’asam-pambolem-bary | Région Boeny
Natsangana tamin’ny fomba ofisialy ny Talata 11 avrily 2017 tao Antandravaha Marovoay ny Vovonana ifandrimbonan’ny mpamboly vary ao an-toerana, hitantana ny tambajotran’ny rano aorian’ny fijanonan’ireo tetik’asam-pambolem-bary miasa ao Marovoay.
Amina maha mpitarika ny fampandrosoana azy dia namoaka ny lalànam-paritra laharana 006/17-REG-BN/CR ny Faritra Boeny, mamaritra ny fananganana io Vovonana io.
Hanao tantsoroka dieny izao ireo tantsaha mampiasa ny tata-drano, hahay hiara-mifampitsimbina eo amin’ny fizarana ny rano sy hahay mikoja ny foto-drafitr’asan’ny rano fanondrahana tanimbary, rehefa mifarana ireo tetik’asam-pambolem-bary ao Marovoay, no antom-pisian’izy io.
Mizarazara ho faritra (secteur) 13 isa ny velaran-tanimbary ao amin’ny lemak’i Marovoay, ka ny faritra faha-2, mirefy 925,9ha ary mamelona mpamboly miisa 1054, no nanombohana ny fananganana io Vovonana io, izay hotohizana amin’ireo faritra hafa sisa avy eo.
Volabe no lany amin’ny fananganana sy fikojana ireo tambajotran’ny rano eto Marovoay, hoy ny lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra, Atoa Hemedy. Notsiahiviny ireo tao Antanimasaka, mirefy 22 600 metatra, notokanan’ny Filoha ny volana novambra 2016, izay niteti-bidy iray lavitrisa sy valo tapitrisa ariary. Ka tsy eken’ny Faritra mihitsy, hoy izy hentitra, ny fanimbanimbana sy ny fanaovana kely tsy mba mamindro amin’ireny foto-drafitr’asa izay natao hitondra fampandrosoana ireny.
Ny momba ny Vovonana
FMT (Fikambanana Mpiray Tambajotra) sy FFMT (Firaisan’ny Fikambanana Mpampiasa Tambajotra), ireo no fiantso ny vondron’ireo tantsaha mitambatra amina lakan-drano tsirairay ao amin’ny lemak’i Marovoay. FMT miisa folo sy FFMT miisa roa araka izany no hitambatra anatin’ilay Vovonana vao natsangana ao amin’ny faritra faha-2.
Latsakemboka avy amin’ireo mpikambana, miampy fanampiana avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny Kaomina no loharanombolan’ny Vovonana. Ity farany moa dia ho mpanelanelana mivantana eo amin’ny tantsaha sy ny Fanjakana araka izay voafaritra ao amin’ilay lalànam-paritra. Voafaritry ny atao hoe Contrat Plan Pluriannuel, niarahan’ireo tantsaha nandrafitra ihany koa ny lahatr’asa rehetra ho tontosainy isan-taona.
Foto-drafitr’asan’ny rano fanondrahana: fitiliana sy fanavaozana
Eo andàlam-pitiliana ireo foto-drafitr’asan’ny rano fanondrahana rehetra misy fahasimbana sy ilàna fanarenana ao amin’ireo faritra 13 ao amin’ny lemak’i Marovoay ny Ministera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny Fambolena sy Fiompina. Orin’asa avy ao Mali miara-miasa amina teknisiana Malagasy no mana-tontosa izany.
Rehefa vita ny fanadihadiana, dia vola roa lavitrisa sy 500 tapitrisa ariary avy amin’ny mpamatsy vola no atolotry ny Ministera ampiasaina hanarenana ireo foto-drafitr’asan’ny rano fanondrahana vita fitiliana ka mila fanamboarana. Aorian’izay dia anjaran’ireo Vovonana no mitantana ireo foto-drafitr’asan’ny rano fanondrahana ireo, rehefa miala ireo tetik’asa toy ny BVPI (Bassins Versants Périmètres Irrigués), ny PHRD (Policy and Human Resources Development), ary ny PURSAPS (Projet d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et la Protection Sociale).